Kiobà: Nampisahotaka An-tserasera Ireo Tranobe Nianjera Tao Afovoan-tanàna Havana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2012 3:46 GMT
Tao anatin'ny telo herinandro lasa izay, tranobe anankiroa no nirodana tao afovoan-tanànan'i La Havana. Miorina ao Calzada de Infanta, misy arabe maresaka miainga hatreny Vedado ao an-tànana taloha ao La Havana, namono olona telo ny tranobe nianjera voalohany ary enina hafa kosa naratra mafy. Tsy nisy kosa ny aina nafoy na naratra tamin'ny fianjeran'ny tranobe faharoa, trano fanaovana teatra efa tsy nampiasaina intsony.
Mpamahana bolongana avy amin'ny Voces Cubanas sy Havana Times nahita ny loza ho toy ny porofo mazava amin'ny tsy firaharahian'ny mpiasam-panjakana ny fepetra momba ny trano onenana ao an-tanàna.
Generacion Y Yoani Sánchez nanoratra hoe (dikateny amin'ny teny anglisy eto):
Calzada de Infanta, ao Havana. Sary tao amin'ny Flickr amycgx (CC: BY – NC)
Vahaolana haingana manao ahoana no tokony hampiharina mba tsy hitohizan'izao voina mampalahelo izao ho andavanandrom-piainana eto amintsika? Ho ekentsika ve ny valinteny toy ny hoe, “Eo ampadinihana ny olana izahay mba hisian'ny vahaolana hotanterahina miandalana eny ihany.” Sa omentsika tsiny ve ireo mponina ireo, izay mijanona amin'ny toerana tsy azo onenana. Aiza no tokony alehan'izy ireo? Raha tsy izany, mangataka amin'ny Fanjakana izahay hanorina trano, hanamboatra trano sy hiaro anay.
Sin EVAsion Miriam Celaya nanoratra fa nanjary ” mahazatra” ny loza tahaka izao ao an-tanàna, saingy ilay voalohany no tena nanintona mafy ny sain'olona ho tsy mahazatra, noho izy tranobe miorina eo afovoan-tanàna, sy ny tatitra momba ny fianjeran'ny trano avy amin'ny mpisiokantserasera.
Nitatitra ny loza niseho ny mpisionkatserasera sy ny mpamaham-bolongana, Celaya nanoratra fa tsy manan-tsafidy ny gazetim-panjakana amin'ny fitantarana ny zavamisy tena marina. Nitsikera ny fomba fitantaran'ny gazetim-panjakana ny zava-niseho izy (dikateny amin'ny teny anglisy eto)
Nanaraotra ny voina niseho ny gazety revolisionera nanasongadina ny maha-zavadehibe ny fandraisana anjaran’ ny Sampan-draharana Mpamono afo, ny Polisy Nasionaly Revolisionera, ny Tobim-pahasalamana misahana ny Vonjy taitra sy ny manampahefana eny amin'ny faritany sy ny monisipaly ao Centro Habana sy Plaza de la Revolución. Notsarain'ny haino aman-jery ny amin'ny tena toetrany izy ireo. Nafenimpenina kosa ny voina nihatra tamin'ny olombelona ary miha-adino raha oharina amin'ny fahalehibeazan'ny andrimpanjakana revolisionera.
Nofeheziny toy izao ny lahatsoratra momba ny trano nirodana tao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro, Granma niseho tamin'ny 19 Alakamisy Janoary:
“Asa mafy sy mirindra” no notontosain'ny “Sampan-draharaha mpamono afo sy ny Sampan-draharaharam-pahasalamana misahana ny vonjy taitra nandritra ny famonjena ireo niharam-boina sy ny ezaka nataon'izy ireo tamin'ny famonjena ain'olona voafandrika,” toa tsy toy izany mihitsy ny andraikitra nandrasana tamin'ireto fikambanana ireto, na toy ny hoe zavatra nataon'Andriamanitra mihitsy ny fianjerana tranobe toy izao, na koa hoe maritrano haitraitra fotsiny; zavatra kisendrasendra, tsy nampoizina, tsy hay vinavinaina na fanahy iniana ihany koa.
Isbel Díaz Torres, ao amin'ny Havana Times, nanoratra fa efa haolo be ireo tranobe maro nianjera tao Havana ary namariparitra ihany koa izy ny amin’ ny politikan'ny governemanta namela ireo Kiobana tsy manana fahafaha-manamboatra ny tranony:
Araka izay efa nambara, ny paikady vaovao napetraky ny governemanta amin'ny fampidramam-bola hanavaozana ny trano ipetrahana sy ny famatsiam-bola avy aminy dia tsy sahaza ny asam-panamboarana vaventy amin'ny ankapobeny, ilaina amin'ireo tranobe efa simba tanteraka mameno ny renivohitra, indrindra ny ao amin'ny monisipaly Afovoan'i Havana sy ny tanàna taloha.
Marina tokoa, maro amin'ireo tranobe no efa simba tanteraka ka ny fandrodanana azy no vahaolana tokana. Na dia izany aza anefa, tokony hahazo trano hafa ipetrahana ny olona mbola monina amin'izany trano izany.